Hurumende Inotadza Kupedza Mari Yayakabhajeta
Gurukota rezvemari, Muzvinafundo Mthuli Ncube, vati hurumende yashandisa mari shoma pane yavaifungira kuti vachange vashandisa kusvika pari zvino vakati zvinoratidza kuti hurumende ichangoshandisa mari yakatarwa yegore rino pamabasa ayo.
Vachitura ongororo yavo yemashandisirwo emari yehurumende yegore rino inoitwa pakati pegore, VaNcube vati zvisinei nedenda reCOVID-19 riri munyika, pamari yaifanirwa kunge yakashandiswa kusvika muna Chikumu, pakasara mari inosvika mamiriyoni mazana masere emadhora emaRTGS.
Va Ncube vazivisawo kuti mari inotambirwa nemushandi ichange ichizobatirwa mutero yakwidzwa kubva pamadhora zviuru zviviri kuenda pamadhora zviuru zvishanu.
Vatiwo pamari yevashandi vehurumende yavari kupiwa nekuda kwechirwere cheCovid-19, ichange isingabatirwi mutero kwegore rese kutanga mwedzi waKubvumbi.
VaNcube vatiwo kunyange hazvo pavakazivisa bhajeti regore rino vaitarisira kuti hupfumi hwenyika hukure nezvikamu zvitatu kubva muzana,vati izvi hazvichagoneki nekuda kwechirwere cheCovid-19 vakati hupfumi huchadzokera shure nezvikamu zvina nechidimbu kubva muzana.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzehupfumi hwenyika dzinoti VaNcube havana kutaura kuti nyika ichapedza sei matambudziko aripo.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi musangano re Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, VaNyasha Muchichwa, vati vanoshamiswa kunzwaVaNcube vachiti pane mari yakasara asi munyika muine matambudziko akawanda asina kugadziriswa sekuramwa mabasa kwaana chiremba huye kuwanisa vanhu zvekudya. Vatiwo mari isingabatirwi mutero ichiri shoma zvakanyanya.
Mumwe mugari wemuHarare, VaOwen Dhliwayo ,vatiwo zvataurwa naVaNcube hazvishanduri hupenyu hweveruzhinji avo vanga vari kutarisira kurerutsirwa munyaya dzehurombo
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VaSamuel Wadzayi, vatiwo VaNcube vanga vaine nhava yanga izere mhepo.
Vati vanga vakatarisira kuti paunzwe hurongwa hwekubatsira vanoita mabasa emaoko avo vakakanganiswa zvakanyanya nechirwere cheCOVID -19.
Vamwewo vatiwo vanga vachitarisira kuvandudzwa kwebhajeti renyika pachinzvimbo chekuudzwa kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufamba zvakanaka nemari iripo.